Maanta waxey aheyd 1da May, maalinta shaqaalaha aduunka, oo la fasaxy dhammaan shaqaalaha dawlada Soomaaliya |
Maanta waxey aheyd 1da May, maalinta shaqaalaha aduunka, oo la fasaxy dhammaan shaqaalaha dawlada Soomaaliya
Maanta waxey aheyd 1da May, maalinta shaqaalaha aduunka, waxaa la fasaxy dhammaan shaqaalaha dawlada, waxey kaloo ku soo beegantay Baarlamaankii oo shalay la xiray, waxaan idiinsoo gudbinanaa xafladii Dawlad iyo sidii ay u dalxiisayeen qaar kamida Golaha Shacabka. iyaga ku damaashaadayay Xeebta Liido. ‘Waxaan ku qabanay barnaamijkii heesaha Hirgalay ( Muqdisho got talent) , waxaana garsoore ka ahaa Cabdinaasir Zola oo ay Soomaaliya ugu dambeysay 30 sano ka hor. wareega ugu dambeeyay waxaa isku soo haray aniga Cawil Daahir Salad. Anigu heestii dhakhtar bey su keen qoray ayaan uga qayb-galay.
Maalinta xoogsatada aduunku ha noolaato’ Shire Ciyaar Jecel’.